HTTP mamiriro makodhi, chii?
Nhasi makambani anoda mhinduro kwete matambudziko. Iyo digital medium yave mukana webhizinesi we ...
Code Club World: kuti vana vadzidze kukodha kubva kumba
Code Club World chirongwa chinonakidza icho chakagadzirirwa kuti vana vadzidze kuronga vari kumba
Project OWL: Kana Yakavhurika Source Inobatsira Matambudziko
Kune njodzi dzakawanda dzinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, dzakadai semafashamu nekusanaya kwemvura, nedzimwewo dzakangoitika dzoga. Project OWL inouya kuzobatsira mune izvi ...
Tekinoroji nyowani nehungwaru hwekugadzira hunogona kuita kuti maguta arambe akasimba, uye ndizvo zvinorehwa neUrban InVEST.
FreeCAD: Kutyaira CAD munyika yeGNU / Linux?
Kana iwe uchida kushandisa CAD software mune yako GNU / Linux kugovera kune yako hunyanzvi kana yezvidzidzo zvako, izvi zvinokufadza.
Android 12 ikozvino yave kuwanikwa kune yako Raspberry Pi 4
Iye zvino unogona kunakidzwa neiyo Android 12 inoshanda sisitimu pane itsva SBC Raspberry Pi 4 bhodhi, kunyangwe isiri iyo yepamutemo ...
pCloud, rakanakisa gore rekuchengetedza sevhisi, ine multiplatform mutengi
pCloud yemahara gore rekuchengetedza sevhisi iyo inopa 10 GB yenzvimbo, kunyangwe mamiriro ekuwedzera anogona kuzadzikiswa ...
Vhura sosi ecosystem yedrones?
Mune ino chinyorwa iwe uchaona inonakidza ruzivo nezve yakavhurika sosi ecosystem yeiyo inowanikwa urombo drones